सन्दीपले किने नयाँ बाइक, कति पर्छ मूल्य? - Everest Dainik - News from Nepal
सन्दीपले किने नयाँ बाइक, कति पर्छ मूल्य?
काठमाडौं, वैशाख ३१ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) खेलेर आइतबार मात्र स्वदेश फर्किएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नयाँ बाइक खरिद गरेका छन् । उनले झण्डै १० लाख खर्चेर नयाँ बाइक किनेका हुन्। सन्दीपले आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो परिवारमा नयाँ सदस्य थपिएको भन्दै बाइकको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्।
याे पनि पढ्नुस आइपिएलमा आज फाइनल प्रवेशका लागि हैदराबाद र कोलकत्ता भिड्ने
बिएमडब्लू कम्पनीको ३१० आर मोडलको ३१३ सिसीको उक्त बाइकको नेपाली बजारमा ९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ पर्छ। बिएमडब्लुको आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराड नारायणचौर नक्सालका व्यापार प्रतिनिधिले विजेश थापाका अनुसार सन्दीपले सोमबार सोही सो रूमबाट बाइक खरिद गरेका हुन् ।
गतवर्षको आइपीएलमा डेब्यू गरेका सन्दीपको चर्चा अहिले विश्व क्रिकेट जगतमा छ । यो पटकको आइपीएल सिजनमा उनले ६ खेलमा ८ विकेट हासिल गरे । सन्दीपआवद्ध दिल्ली क्यापिटल्स यो वर्ष पहिलो पटक आइपीएलको दोस्रो क्वालिफायरमा पुग्न सफल भयो ।
याे पनि पढ्नुस सन्दिप टी टेन क्रिकेटमा पनि अनुबन्ध, क्रीश गेल भएको टिमबाट खेल्ने